Haweenku waa reer RIM, Ragguna waa reer Google | Martech Zone
Sabti, Agoosto 27, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Ayaa ogaa in aaladaha, barnaamijyada, barnaamijyada iyo xitaa qiimaha gujiska ah (CTR) ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dheddigga qalabka moobiilka? Aan firfircooneyn ayaa dhawaan soo saaray macluumaadkan suuq geynta ah ee ka hadlaya kala duwanaanshaha. Wax qabad la'aantu waxay dhistay mishiin kordhinta waqtiga-dhabta ah oo si joogto ah u shaqeeya si loo hubiyo inaad hesho heerka ugu sarreeya ee buuxinta iyo eCPM ee suurtogalka ah daqiiqad kasta.
Laba natiijooyin oo muhiim ah:
Ragga waxay ka jawaabeen suuqgeynta moobiilka waxayna leeyihiin qiimeyn aad u sarreeya oo gujinaya.
Raggu waxay ku xardhan yihiin Google Android, haweenkuna waxay u hayaan RIM's Blackberry.
Maxay Tahay Sababta E-mailkaagu Ugu Samayn Weyday Sanduuqa?